Bank Moon ?Al-shabaab xal ha loo helo ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka soomaaliya 2016-ka? – Radio Daljir
Diseembar 4, 2013 3:05 b 0
New York, December 4, 2013 – Xoghayaha guud ee qaramada midoobey Bank Moon ayaa caalamka ugu baaqay in aan la eegan awooda Al-shabaab ee soo noqon karta, wuxuu ka digay xiriirka xoogaystay ee dhexmaray Al-shabaab iyo ururka Al-Qaacida.
Qoraal shalay ka soo baxay xafiiska xoghayaha guud ee qaramada midoobey Bank Moon ayaa lagu cadeeyey in ururka Al-shabaab oo xiriir adag la yeeshay ururka Al-Qaacida, war-bixinta ayaa lagu xusay inay taas khatar ku wayn ku tahay gobolka oo idil.
Xoghaye Bank ayaa ka dalbaday beesha caalamka inaan dowladda Soomaaliya iyo AMISOM lagu fiirsan khatarta kooxda Al-shabaab, waxaa uu ka digay weeraro qorshaysan iyo dagaalo toos ah oo kooxdu ku qaado meelo ka tirsan gobolka.
?horumarka laga gaaray siyaasadda, talaabooyinka la qaaday iyo doorashada la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo 2016-ka, waxaa hortaagan caqabado ay Al-shabaab ugu horayso.? Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Bank Moon
Bank ayaa caalamka ka dalbaday in Soomaaliya laga taageero sidii xal loogu heli lahaa kooxdaas ka hor doorashooyinka dhici doona.
Sheikh Mukhtaar Abu Zubayr oo ah hugaamiyaha Al-shabaab ayaa cajalad soo baxday febeuary 2012-kii waxaa uu ku sheegay in ay la midoobeen ururka Al-Qaacida, dhinac kasta hadii ay noqon lahayd fikir ahaan, siyaasad ahaan, iyo ciidan ahaan intaba.
Hay?addaha gargaarka oo loo gudbinayo qiimayn lagu sameeyey khasaaraha fatahaada webiga shabeelle